म वडाबाट देश बनाउन चाहन्छुः अमुसिंह सिजापति – || koselinews.com ||
म वडाबाट देश बनाउन चाहन्छुः अमुसिंह सिजापति
May 7, 2017 Loksari kunwar Interview, main_news, News 0
राजनीति नगरेकी र नबुझेकी अमुसिंह सिजापति पहिलोपटक खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छिन् । दोस्रोपटक परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय वडा सदस्य बनेकी सिजापतिले राजनीतिमा जालझेल कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा परिवार नियोजमै बुझिसकेकी छिन् । २०३९ साल वैशाख १५ गते जन्मिएकी अमु उमेरले युवा नै छिन् । तर उनको दुःख, संघर्षको कथा भने निकै गहिरो र गर्विलो छ । पुख्र्यौली घर वीर अस्पताल क्षेत्र महाबौद्ध भएकी उनी काठमाडौंको बालुवाटारकी स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रहरीका जागिरे बुवाको जागिरका सिलसिलामा उनले देश दुनिया थोरै भए पनि देख्ने मौका पाइन् । काठमाडौंको महेन्द्र भवन हुँदै मेरिल्यान्डबाट दस जोड दुई अध्ययन गरेकी अमुले त्रिचन्द्रबाट बीए सकाइन् । भारतको बैंगलोरमा थप अध्यन गर्न गएका बेला २०५८ साल असार २६ गते अमुका बुवा तत्कालिन एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) परमेश्वर सिजापतिको दाङमा माओवादीले हत्या गरे । उनी माओवादीबाट मारिने प्रहरीका पहिलो उच्च अधिकारी थिए ।
कलिलो उमेरमा बुवा गुमाएकी उनी बीचैमा पढाइ छोडेर नेपाल फर्किन । घरपरिवार सम्हालिन् । यही क्रममा उनले परिवार नियोजन संघमा स्वयंसेवकको रुपमा सेवा सुरु गरिन् । सन् २००८ मा संघको विधान संशोधन भयो । उनलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रको महिला सदस्यमा चुनाव लड्न भनियो । उम्मेदवारी दर्ता गरिन् । प्यानलकै साथीले साथ दिएनन् । त्यो सकसपूर्ण यात्राले समाज, व्यक्ति, राजनीति के हो ? भन्ने ज्ञान दियो । उनले २१ मतले निर्वाचन जितिन् । यो यात्रामा उनी यति धेरै अगाडि पुगिन कि नौ महिनाकी गर्भवती हँदा पनि उनले निर्वाचन लडेर एक मतले निर्वाचन जितिन । सानै उमेरमा ठूलो संघर्षको कथा बोकेकी अमु यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४ नम्बर वडाको वडा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् । उनी किन वडा सदस्यमा उठिन त ? यिनै जिज्ञासाहरु बारे गरिएको छोटो संवादः
परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय वडा सदस्यजस्तो मान्छे, किन वडा वडा सदस्यमा रहर गर्नुभयो ?
परिवार नियोजन संघ मेरो सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो । देशकै सेवाका लागि खुला राजनीति नगरी हुँदैन भन्ने लाग्यो । अनि म यता पनि सक्रिय भएकी हुँ ।
अलि ठूलो पदमा किन नउठ्नु भएको ?
एमए गर्नेले पनि क, ख नपढी हुँदैन । राजनीतिमा यो मेरो पहिलो पाठशाला हो । घर बनाउन पनि पहिला जग राम्रो हुनैपर्छ । देशको पनि जग हुन्छ । त्यो भनेको गाउँ, वडा नै हो । मैले वडालाई बुझिन भने, सुन्दर र सुव्यवस्थित बनाउन आँट गरिन भने, देश बनाउने कुरा गफै हो । म महत्वाकांक्षी मान्छे होइन, सानैबाट माथि पुगे पो त्यो दिगो र मजबुत हुन्छ त ।
दिगो, मजबुत र वडाका लागि सम्झन लायक त्यस्तो के काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
परिवार नियोजन संघमा बसेर काम गर्दा मलाई लाग्थ्यो मैले देश बुझेकी छु, तर त्यो भ्रम रहेछ । हामीले त आफू बस्ने टोल, छिमेर र वडा पनि राम्ररी चिनेका रहेन छौँ । काठमाडौंको ४ नम्बर क्षेत्र अझ बालुुवाटार एरिया त हार्ट अफ सिटी हो । विडम्बना यहीँ एक धुर जमिन नभएका सुकुम्बासी रहेछन्, हरेकको दैलोमा गाडी पुग्नुपर्ने हो तर मान्छे पछि छड्के भएर छिर्नुपर्ने गल्ली रहेछन् । हामी रुकुम रोल्पा र डोल्पामा गाडी पुर्याउे कुरा गर्छौ तर राजधानीका हाम्रै टोलमा एम्बुलेन्स र दमकल पुग्ने बाटा छैनन् । विजयी भएपछि के पहल गर्नुहुन्छ ? स्थानीय तह भनेको पहिलो सरकार हो । यी विषहरुले वडामा प्रवेश पाउँछन् । अब पानी, ढल पुरानो नारा हो, यो त २० वर्ष अघि पनि लगाइएको थियो । अब कम्तिमा देशका हरेक वडाका मानिसले स्तरीय जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो वडालाई त्यो स्तरमा नपुर्याई देश बनाउँछु भन्नु हावादारी गफ हो । म त्यसका लागि जुन स्तरको संघर्ष गर्न पनि मञ्जुर छु ।
तपाईंका मुख्य मुद्दा के हुन ?
मैले माथि पनि भने, खुला सडक, स्तरीय आवसको व्यवस्था, एम्बुलेन्स र दमकल प्रवेश गर्ने बाटो, सुरक्षाको उचित प्रवन्ध अनि यौन र महिलासिंहा मुक्त वडा मेरो परिकल्पना हो । कुनै अन्य क्षेत्रको नागरिकले ‘आहा ! यो एरियामा बस्न पाए पो हुने’ भन्ने स्तरमा पुर्याउने मेरो लक्ष हो ।
कसरी सम्भव होला त ?
गरे के सम्भव छैन ? स्वीजरल्यान्ड पो बनाउ सकिँदैन त । हरेक नागरिकको सहभागितामा यो सम्भव छ । तर स्थानीय सरकारले उपल्लो सरकारलाई सक्रिय बनाउने हिम्मत हुनुपर्छ । त्यो आँट म राख्छु ।